Izinto zokunxiba impahla yokunxiba → Izinto zokusebenzela • Ukufakelwa iimpahla zobugcisa kwikhompyuter
Izinto zokunxiba lukhetho lweemveliso ezisebenza kumashishini ahlukeneyo. ezongezwayoEsizinika ivenkile yethu ziimveliso ezivela kubavelisi esisebenzisana nabo ekuhambiseni iimpahla kunye neempahla ezilukiweyo.
Unokuqiniseka ukuba zikumgangatho ophezulu. Sisebenza kunye neempawu ezithembakeleyo ezingonwabeli uluvo oluqinisekileyo, kodwa zikhathalele nokwandisa uluhlu. Kolu luhlu ungathenga, phakathi kwabanye izibopho, iimaski okanye amakhaka okhuselo obuso.
Isithembiso sethu sinikezelwe kwiinkampani zombini nakubathengi babucala. Enkosi rhoqo Umsebenzi weqela kunye neeodolo ezinkulu, sinokukunika amaxabiso anomtsalane aqala kwinto enye. Kukho ithuba lokufumana isaphulelo esongezelelweyo kwiiodolo ezinkulu.
Izinto zokunxiba ziyinto engenakwahlulwa yokunxiba kuye wonke umntu okhathalele umfanekiso opheleleyo nongaguquguqukiyo. Iqhina elinemfashini lilingene kakuhle ihempe, kwaye ukuba ihempe ityetyisiwe ilogo nganye okanye ubugcisa obuchanekileyo benkampani, inyusa udumo lwenkampani kwaye ikhuthaze ukuthembela okukhulu kumqeshwa.
Tie Yenziwe ngelaphu elomeleleyo elinelinen eshinyeneyo, enganyangekiyo kumonakalo ixesha elide, konke ukuyenza ibonakale intsha njengamaxesha amade. Iqhina lithengwa ngokuzithandela ukuze lincedise iimpahla zabasebenzi ehotele kwidesika yolwamkelo kunye nabalungiseleli kunye nabasomashishini.
Iimaski zokukhusela umlomo kunye nempumlo, eza ngeendlela ezahlukeneyo, zisathandwa. Ubuninzi bemibala ngokuqinisekileyo buya kukuvumela ukuba ukhethe into kubantu abadala kunye nabantwana. Iimaski zathungwa kwigumbi lethu lokuthunga, enkosi apho siqinisekile malunga nezinto ezisetyenzisiweyo kunye nomgangatho wobugcisa.
Zenziwe ngamalaphu akhuselekileyo enziwe ngezinto eziqinisekisiweyo, ezingenazo naziphi na izinto eziyityhefu. Sithengisa iimaski ezinokusetyenziswa kwakhona kunye neemaski ezilahlwayo. Sineemaski ezinepokotho yecebo lokucoca endaweni elinokubuyiselwa.
Isigqumathelo somqhaphu, igrafite
Kulungiselelwe abo banenkathalo ngentuthuzelo enkulu kunye nenkululeko yokusebenzisa kunye nekhaka lobuso ngaxeshanye, senze iintlobo ezimbini zeminqwazi. Si Izigqoko zobuso ezipheleleyo yenziwe nge-visor yekotoni kunye nemaski kwaye iminqwazi emincinci igubungela ubusuku nemilebe, ngakumbi intofontofo kubantu abanxibe iiglasi. Iimveliso zethu ziyahlangabezana nemilinganiselo kunye nemigangatho efanelekileyo.
Impumlo encinci kunye nesigcina-ntloko somlomo
Isigcina-ntloko esigcweleyo sobuso
izixhobo zempahlaIzinto zokunxiba zamadoda